Akụkọ - Ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na -enweta ma mmepụta na ire ahịa
Ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na -enweta ma mmepụta na ire ahịa
Na -achọ akụkọ kacha ọhụrụ banyere ịnyịnyaụlọ ọrụ, enwere isiokwu abụọ enweghị ike izere: otu bụ ire ọkụ. Dabere na data sitere na Association Bicycle China, kemgbe nkeji iri na ise nke afọ a, agbakwunyere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke igwe obodo m (gụnyereigwe eletrik) ụlọ ọrụ nrụpụta amụbaala karịa 30%. Site n'ọnwa Jenụwarị ruo Machị, mmepụta ịnyịnya ígwè karịa nha ahapụtara bụ nde 10.7, mmụba afọ na-abawanye 70.2%; Mmepụta nke ịnyịnya ígwè karịa nha ahapụtara bụ nde 7.081, mmụba otu afọ na 86.3%.
Nke ọzọ bụ mmụba ọnụahịa. Ebe ọ bụ na mmalite nke afọ a, ụfọdụ ụdị nke igwe eletrik na ike ịkpa ike abawanyela ọnụ ahịa ire ahịa ha n'etiti 5% na 10%.
Ọrịre ọrịre na mmụba ọnụ ahịa na -egosipụta mmepụta na ire ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe kemgbe afọ gara aga, mana ọ nwere ike ịga n'ihu na -esote?
Zhonglu Co., Ltd. bụ onye ama ama onye na -emepụta igwe kwụ otu ebena China. Ụgbọ ịnyịnya akara "Ebighị Ebi" nke ndị enyemaka ya mepụtara, yana Shanghai Phoenix na Tianjin Feige, ka a na -ahụta dị ka akara mba. Nkwupụta afọ 2020 nke ụlọ ọrụ ahụ na-egosi na afọ gara aga ụlọ ọrụ ahụ nwetara ego ọrụ nke nde yuan 734, mmụba otu afọ na 25.60%, nke kachasị na afọ iri gara aga.
Ebee ka mmụba dị elu si enweta? Site na usoro azụmaahịa, azụmaahịa ịnyịnya ígwè bụ isi mmalite nke ego ọrụ Zhonglu, na -aza 78.8% nke ego ha nwetara. N'ihe banyere olu ire ere, ire ahịa ịnyịnya ígwèna strollers mụbara site na 80.77% kwa afọ. N'ihe banyere ahịa dị iche iche, ego na-arụ ọrụ n'ahịa ụlọ rịrị elu site na 29.42% kwa afọ. Nnukwu mmụba nke ire ahịa kpaliri mmụba ngwa ngwa nke ego ha nwetara wee chọpụta mgbanwe site na mfu gaa na uru.
Ahụike Xinlong bụ onye rụpụtara akụkụ ịnyịnya ígwè, data ya na -egosipụtakwa ire ịnyịnya ígwè n'afọ gara aga site n'ụzọ ọzọ. Na 2020, ụlọ ọrụ ahụngwa ịnyịnya ígwèiwu abawanyela nke ukwuu n'afọ na afọ. Mmụba nke ire ngwaahịa akụkụ ahụ akwalitela mmepe ahụike Xinlong.
Data mbupụ ụlọ ọrụ 2020 nke ndị otu igwe kwụ otu ebe China wepụtara ụbọchị ole na ole gara aga gosikwara nke a. Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-egosi na obodo m bupụrụ ịnyịnya ígwè nde 60.297 n'afọ gara aga, mmụba afọ na-abawanye na 14.8%. Mgbe United States kwụsịtụrụ ụtụ isi na ngwaahịa ngwaahịa igwe kwụ otu ebe, mbupụ ụgbọ ala ebidola ọzọ, na-ebuga ụgbọ ala nde 16.216 na United States n'ime afọ niile, mmụba nke otu afọ na 34.4%.
Banyere ihe kpatara ewu ewu nke ịnyịnya ígwè,ndị ọkachamara ụlọ ọrụ kwenyere na n'ihi mkpa mgbochi ọrịa na-efe efe, ihe ndị mmadụ na-achọ maka njem dị anya adịla elu nke ukwuu, na ịnyịnya, gụnyere ịnyịnya eletrik, bụ nhọrọ kacha mma. Na mgbakwunye, ọtụtụ mba Europe na Amerịka ewebatala ego inye aka azụ ahịa, ịbawanye okporo ụzọ ịnyịnya ígwè na ihe mkpali ndị ọzọ, nke na -akpalitekwa ị consumptionụ igwe.
Ọrịre ndị na -ekpo ọkụ nwere ike ịdịru? Onye dị mkpa na -ahụ maka Association Autonomous Association na -ebu amụma na mmepụta ịnyịnya ígwè ga -eru nde 80 na 2021, na mpụta nke ịnyịnya eletrik ga -adị ihe dị ka nde 45. A na-atụ anya na mbupụ ịnyịnya ígwè na igwe eletrik ga-enwetakwa ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ.
Kemgbe mmalite nke afọ, enwere akụkọ mgbasa ozi na mgbe ị na -ere nke ọma, ụfọdụ ụdị ụgbọ eletrik enyela ndị na -ere ahịa ọkwa gbasara mmụba ọnụ ahịa. Onye nta akụkọ sitere na Daily Daily gara ọtụtụ ụlọ ahịa eletriki igwe eletrik wee chọpụta na ọnọdụ ahụ dị iche. Ụfọdụ ụdị emebeghi ọnụ ahịa ha, ụfọdụ na -ekwu na ha abawanyela ọnụ ahịa ha, ụfọdụ kwuru na agbanyeghị na ọnụ ahịa ha abawanyela, enwere ike belata ha ọzọ n'ụdị ego.
Site n'echiche ndị nrụpụta, Emma ụgbọ ala eletrikenyelarị ndị na-ere ahịa ọkwa ngbanwe ọnụahịa na mbụ, na mmụba nke otu ụgbọ ala sitere na yuan 80 ruo 200 yuan. Dị ka ndị na -ahụ maka ụgbọ ala eletrik nke Yadea si kwuo, kemgbe mmalite afọ, ọnụahịa ire nke ụgbọ ala Yadea ejirila yuan 100 rịa elu. Na mgbakwunye, ọtụtụ ụlọ ọrụ akụkụ igwe eletriki eletrik ewepụtala ọkwa mmụba ọnụahịa.
Ndị ọkachamara n'ichepụta ụlọ ọrụ kwuru na mmụba ọnụ ahịa na -emetụta oke ọnụ ahịa nke akụrụngwa. Kemgbe ọnwa Eprel afọ gara aga, ka ọnụ ahịa nnukwu ngwa ahịa mba ofesi ka na -arị elu, ọnụ ahịa akụrụngwa dị ka nchara, aluminom, ọla kọpa, plastik, taya, na batrị ndị metụtara mmepụta ụlọ ọrụ arịgoro elu. A na -ebute mgbanwe ọnụahịa dị elu na mpaghara etiti na ụgbọ ala mgbada.
Na mgbakwunye, ọkọlọtọ mba ọhụrụ, nke ewepụtara na Eprel 2019, chọrọ ụgbọ ala eletrik nwere ụkwụ abụọ iji nweta asambodo 3C. Ụfọdụ kwenyere na iji mezuo ihe achọrọ n'ọkwa ọhụrụ nke mba, ndị na -emepụta igwe eletrik ga -emeziwanye ihe na usoro ha, ọnụ ahịa ha ga -abawanye kwa otu. Na mgbakwunye, mmụba a na -achọ igwe eletrik n'oge ọrịa na -efe efe ga -eme ka ọnụ ahịa ahịa ha rịa elu.
Onye dị mkpa na -ahụ maka ndị na -ahụ maka Auto Auto nke China kwuru na mmụba ọnụ ahịa aghọbeghị ihe a na -ahụkarị na ụlọ ọrụ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ụdị ụlọ ọrụ abụọ bụ isi nke na -abawanye ọnụ ahịa. Otu ụdị bụ ụlọ ọrụ na -eji njirimara Ịntanetị abanye na ụlọ ọrụ, ọnụ ahịa ya adịghịkwa ukwuu, uru ya dịkwa mkpa; ụdị nke ọzọ bụ ụlọ ọrụ na -eduzi nwere olu ahịa siri ike ma na -anwa ịbawanye ọnụ ahịa ngwaahịa. Nyefee nrụgide nke ọnụ ahịa akụrụngwa na -arị elu.
Oge ezipụ: Aug-17-2021